Highster Mobile Ongororo & Ratings 2021: Pros, Cons, Mutongo
January 8, 2021 Jeff - Mumiriri weKutsigira kwehunyanzvi 66 Comments Nhare kusora - ZVINOGONESESA
ZVINOSHAMISIRA HIGHSTER MOBILE SPY INE DAMBUDZIKO DZIMWE, Uye HAZVI SHANDIRI.
Iye zvino tinokurudzira mSpy seyechipiri yakachipa, kuita kwakanakisa, uye hukuru mhando imwe nzira.
Tarisa zvangu MSPY KUDZIDZA.
ZVIMWE ZVAKAITIKA -> CHEAPEST ZVAKASIYANA mSpy
1 ZVINOSANGANISIRA HIGHSTER MOBILE SPY INE DAMBUDZIKO DZIMWE, Uye HAZVI SHANDIRI.
2 Highster Nhare Yekuongorora - PROS
3 Highster Nhare Yekuongorora - CONS
4 Zvinokatyamadza Zvinobatsira Highster Mobile Spy App Izvo Zvako!
5 Ongororo Yakazara yeHostster Mobile Android uye iPhone Spy Mano
6 Android Spy Ongororo
7 iPhone Spy Ongororo
8 Highster Nhare Yemahara Ongororo - Zvakakosha Izvo Kana Kuti Kwete?
9 Highster Anoshanda Chaizvoizvo here? Vatengi Ongororo
10 Cell Nhare Kuongorora Kwevabereki - Vabereki Ongororo
11 Nhare mbozha Kuchengeta kweMhuri Dziviriro - Mhuri Kudzivirirwa Ongororo
12 Nhare mbozha Kuongorora kweMakambani - Vashandirwi Ongororo
13 Kuchengeta Vashandi Nhare mbozha - Makambani Ongororo
14 Anoshanda Highster? Phones Spy Ongororo Mhedziso
15 Nzira yekutenga Highster Mobile Spy Software
16 Maitiro Ekubudirira Kupedza Highster Kutenga Maitiro mune 4 Nyore Matanho?
17 Zvaunofanirwa Kuita Kana Uchinge Uchaisa Nzvimbo Kurongeka…
18 Rakareruka Interface Inodaidzwa Highster Online Control Panel
19 Phones Spy Kuenderana Ongororo - Anoshamisa Rondedzero yeApple & Apple Midziyo
20 Ongororo ye Highster Android Kuenderana
21 Ongororo ye Highster iPhone Kuenderana
22 Maitiro EkuDhawunirodha nekuisa Highster Mobile Spy pane iyo Target Runhare
23 Kune Vanhu Vanoda Kuenderera NeMobile Monitoring - Asi Haugone Kutanga
24 Yekupedzisira Dhawunirodha uye Isa Mafoni Spy Ongororo Mhedziso
25 Highster Mobile vs mSpy vs FlexiSPY Ongororo
26 Ongororo ye Highster Nhare mbozha App
27 Maitiro Ekumisikidza Zvese Zvimiro Nyore? Pane Chimwe Chinhu Chandinofanira Kuziva Nezve?
28 Spy SMS Meseji
29 Spy kune Mumwe munhu Instagram Meseji uye Mifananidzo
30 Spy paMumwe munhu SnapChat Meseji uye Anotora
31 Spy paMumwe munhu vakaverengwa Messages uye Other Account Activities
32 Spy kune Mumwe munhu Android uye iPhone Kufona
33 Track Cell Nhare Nzvimbo
34 Highster Mobile Kwete Jailbreak iPad / iPhone Remote Monitor
35 Highster Nhare Yekuongorora 2021 vs Highster Nhare Yekuongorora 2020 vs Highster Nhare Yekuongorora 2021
36 Mashoko Ekupedzisira
37 Highster Cell Runhare Tracker
Highster Nhare Yekuongorora - PROS
Kutengwa kwe Highster Mobile software inokurumidza, yakapusa uye inonyanya kukosha chengetedzo. Zvakare, kutenga kunogona kuitwa 24/7 kubva chero kupi kutenderera pasirese.
Darika dambudziko uye utore izvozvi ne ZVINOKOSHA KUTENGA Sarudzo » kana kuenderera kuverenga.
Kurodha pasi kunoitwa kuburikidza neyakareruka Highster yekuisa wizard interface.
Kudhanilodha ichi musori Anwendung zviri nyore. Iyo huru yekumisikidza menyu yakanyatsokodzera kuitira nyore kufamba.
Iyo yekumisikidza maitiro ari nyore, nekukurumidza uye zvese zvaunoda kuti uite tap "Inotevera Nhanho". Zvakare pane peji rekurodha, iwe unopihwa nhanho nhanho mirairo kuitira kuti ukasungwa kumwe kunzira.
Iyo Anwendung inoda chete zvishoma zvishoma nzvimbo. Inongoshandisa chete 1.95 MB. Zvakare, kuiswa kwacho kwakanyatsogadziriswa kuti zvive nyore kufamba pamwe nenharembozha pamwe nemahwendefa.
Iyo Highster spy foni app ine imwe yeakareruka maficha anonzi Highster online control panel uko iwe kwaunogona kuona muchivande uye uri kure kuona zviitiko zvese zvakatorwa.
Iwe unogona zvakare kutarisa yangu yega Highster Mobile yekuisa gwara pano.
Highster ndiyo yakanyanya inodhura-inoshanda foni spy app.
Imhaka yekuti iwe unowana ese epamberi maficha eiyo Android uye iPhone kushora uye iyo rezinesi nguva yeupenyu saka hapana kunyoreswa kwemwedzi.
Ese Highster maficha anowanikwa kune Android pamwe ne iPhone nhare mbozha dzinosanganisira iyo namano muoti.
Highster Nhare - Edza Izvo Kwe $ 69.99 chete! - Hupenyu Hwese License
Highster Nhare Yekuongorora
Maitiro ekuisa Highster Mobile
Highster Mobile Kuenzanisa
YEMAHARA QUALITY kutsiva yeHostster Nhare!
Highster Nhare Yekuongorora - CONS
Nehurombo, Highster haipe chero macomponi ekudzora eapp yavo. Uye ichi ndicho chete chinhu chakashata nezve kutenga.
Kudhanilodha ichi musori App zvinotora yakati rebei.
Kutanga, iwe unofanirwa kuenda mukati meiyo huru yekumisikidza menyu. Sarudza iyo OS, wobva waita application uye mushure maizvozvo, unowana download link, saka yakati rebei zvishoma asi nekuda kweizvozvo, maitiro ekurodha pasi ari nyore.
Ini ndaive nedambudziko nekutora matanda ekutaurirana. Nekudaro, kana iwe ukadzika uye uchipa mvumo izere kune Highster zvinoshanda nemazvo.
Zvinokatyamadza Zvinobatsira Highster Mobile Spy App Izvo Zvako!
Uri kutsvaga iyo inodhura-inoshanda app iyo ichakubvumidza iwe kuti uone Android uye iPhone zviitiko zviri kure?
Ndiri kutengesa iwe. Hameno kuti nei?
Ndanga ndichiedza iyo nharembozha spy apps kwenguva yakareba uye Highster Mobile ndiyo inonyanya kushandiswa Phones Spy app. Yakawanda mibvunzo yandinobvunzwa ndeye iyi spy app uye ndosaka ndichigadzira Highster Mobile ongororo kwandinoda kukupindura pa…
… Mibvunzo yaunogona kuva nayo pamusoro pekugona kuongorora kweHostster Icho chinhu chinoshamisa chinokupa iyo iyo zviri nyore uye uchitsanya nzira yeku:
Pachivande tarisa zviitiko zvemwana wako.
Dzidza chokwadi uye chengetedza nhengo dzemhuri yako.
Tsvaga zviitiko zvevashandi uye simbisa kutendeseka uye kugadzirwa.
Saka zvakadii newe?
Unoda kutanga kuongorora Android od Apple yakavakirwa nhare mbozha? Kana zvirizvo mumasekondi mashoma iwe uchaona izere kudzokorora kweHighster Mobile Android uye iPhone Spy Mano.
Ongororo Yakazara yeHostster Mobile Android uye iPhone Spy Mano
Kana vanhu vandibvunza mibvunzo, muzviitiko zvakawanda iyi mibvunzo yakafanana neiyi:
Ndichakwanisa kuongorora Facebook here?
Ini ndichave ndinokwanisa kusevha dzadzimwa mameseji eSMS kana enhau midhiya?
Highster inoburitsa mumwe munhu GPS nzvimbo, Kufona matanda uye IM chat seLine?
Saka pakutanga kwe Highster Nhare Yekuongorora chinyorwa, ini ndoda kukuratidza iyo zvinhu nyora yeApple uye iPhone spy.
Android Spy Ongororo
Pandinoisa iyo Highster Mobile pane Android ini ndakakwanisa kuongorora maficha aunogona kuwana pamufananidzo uri pamusoro. Ipapo ndakatarisa pane online panhare kuti izvi zvinhu zvicharatidzwa sei kwandiri.
Ndakazviitira izvo zvimwe zvichiongororwa Apps uye ikozvino ndoda kukutsanangurira iwe yese iyo zvakwakanakira uye zvakashata yekutarisa pamwe neapp iyi. Kutanga ndinoda kuziva kuti…
… Android kushora ndeye inotsigirwa zvizere neiyi nhare mbozha.
Izvi zvinoreva kuti iwe unozogona kutora ese maficha aunogona kuona pamufananidzo. Android yekutarisa ndeyemazuva ano anodiwa saka ese ehunyanzvi spy app anofanirwa kutsigira iyi nhare mbozha uye Highster inotsigira zvachose.
Zvakare, izvi zvinoreva kuti parizvino, ese maApp OS shanduro anotsigirwa saka iwe unozogona kuongorora ese Android-based maserura nhare kubva kune ese tech makambani senge Samsung, Huawei, Xiaomi, LG uye nezvimwe
Highster Android kuongorora kugona ndekwe:
Zvese Zvimiro zvinotsigirwa.
Dzese OS shanduro dzakatsigirwa.
Android Stealth Mode inowanikwa.
Zvakare, wongororo yemushandisi inoratidza kuti iyi purogiramu yakachipa kwazvo yekutarisa mhinduro. Parizvino ndiyo inodhura-inoshanda Android nhare yekuongorora nharembozha pamusika.
Iine a rezinesi reupenyu zvinoreva kuti hapana mubhadharo kana chero chakavanzika mari.
Ndezvekuba here? Anogona here muridzi wefoni yeApple kuzviona?
Highster inyanzvi yekuongorora app iyo inoshandisa nechinangwa chekutarisa pakavanzika.
Dai yaisazoba nemamiriro ekunyepera yaisazove yekuongorora pakavanzika Izvi zvine musoro here kwauri? Saka Highster Mobile Spy App inoenda kunonamira mode kana iwe waisa uye nekuimisa.
Kana ichishanda nenzira yekunyepera ndizvo asingaonekwe zvachose yemuridzi wefoni yeApple muridzi.
iPhone Spy Ongorora
iPhone spy ongororo ndiyo yechipiri inonyanya kudiwa mumusika wekutarisa nhare. Ini ndinowana mibvunzo yakawanda nezve iPhone yekutarisa. Vazhinji vashandisi vanoda kuziva zvimwe zvakanangana nezve kugona kwe iPhone. Highster Mobile app inotsigirawo ese iPhone mamodheru kuitira kuti iwe ugone kunosora ese maApple zvishandiso pasina matambudziko.
Zvese maficha kubva patafura iri pamusoro zvakare aripo kune iyo iPhone yekutarisa zvakare. Saka haufanire kuzvibvunza pachako kuti chimiro chinondishandira nekuti ne Highster ichashanda.
Highster iPhone yekutarisa mano ndeaya:
Shanduro dzese dzeIOS dzakatsigirwa.
iPhone Stealth Mode inowanikwa.
Hapana jailbreak uye Hapana chekuisa chinowanikwa.
iPhone yekutarisa ndiyo yakatarwa uye zvishoma kumberi. In masekonzi mashoma iwe uchaona kuti unogona sei nyore kuongorora iPhone pasina kuwana runhare.
Ini Ndinogona Kuchengeta iPhone Pasina Kuwana Iyo Nhare?
Iyo iPhone uye iPad chikuva chakanangana. Unogona kuongorora chikuva ichi usina kana kuwana iyo yakanangwa nhare mbozha. Highster app ine hapana jailbreak uye kwete install chimiro icho chinokutendera iwe kuti utarise iPhone chishandiso pasina kuisa iyo app pane yakanangwa nhare mbozha.
Nekudaro, iwe unozofanirwa kumisikidza iyo app asi izvi zvinogona kuitwa kubva kune yako epamhepo control panel pasina kuwana iyo kubaya iPhone.
Maitiro ese ekumisikidza anozotsanangurwa kwauri nekutenga uye zvakare ndichakuratidza pazasi mune ino Highster Mobile ongororo.
Highster Mobile Mutengo Ongororo - Zvakakosha Izvo Kana Kuti Kwete?
Mune vatengi, Highster Mobile inoongorora mutengo ndiyo chikuru mukana izvo zvinonongedzerwa.
Huwandu hwezvinhu zvaunopihwa kwauri uye rezinesi reupenyu pamutengo wakaderera uchienzaniswa nezvimwe zvigadzirwa zvemakwikwi, isa Highster Mobile pane iyo pamusoro ye most cost-effective spy app paInternet.
Iyi Anwendung ine zvemberi maficha senge…
GPS nzvimbo yekutevera,
…, Inotsigira ese matsva eApple uye iPhone mafoni mafoni anodhura zvishoma pane zvimwe zvigadzirwa uye pakupedzisira, pane hapana mari yemwedzi kana chero rimwe basa raunoda kubhadhara.
Saka zvingave Highster Mobile Mutengo wongororo isu taigona kupedzisa kuti iyi app irinani kupfuura vamwe. Unobvumirana nazvo here?
Highster Anoshanda Chaizvoizvo here? Vatengi Ongororo
Mumwe wemibvunzo inonyanya kubvunzwa anoita Highster anoshanda chaizvo.
Kuti ndikupindure pamubvunzo uyu, ini handina kungoedzwa chete Anwendung iyi asi ini ndinotarisawo vatengi Highster Mobile ongororo. Chinhu chandakawana chakandishamisa kwazvo.
Pandakayedza iyo Highster app iyo yakashanda zvakakwana kwandiri uye mhedzisiro iri mune ino Phones Spy Highster Mobile ongororo. Nekudaro, pandakatsvaga vatengi Highster Mobile kuongororwa paInternet ndakawana mhinduro dzakasiyana.
Ndinozvibvunza kuti sei ndobva ndawona iripi dambudziko.
Yambiro: Ichi Chingave Icho Chinonyanya Kukoshesa Ruzivo Iwe Chaunogona Kuverenga Nezve Highster App
Zvakanaka, pane zvakawanda zvinyorwa paInternet izvo zvinokutendera iwe kutenga iyo app. Asi iwo ose manyuko akavimbika here? Ndinoziva zvauri kufunga uye ndinofungidzira izvo zvavasiri.
Kune akawanda masosi anokupa iwe ne:
App inoshanda kwenguva pfupi.
Scam app iyo isiri kana Highster.
Saka ndinofanira kukuyambira kuti iwe unofanirwa kutsvaga iyo akavimbika sosi yeruzivo uye zvakatonyanya kukosha kuti iwe uchenjere kwaunotenga iyo app.
Nhare dzeSpy dzinokupa iyo ongororo, kumisikidza, kuenzanisa uye zvimwe zvakawanda zvinyorwa zvine ruzivo runobatsira uye iri sosi yakavimbika yave iri painternet kwenguva yakareba. Saka kana iwe uchida kudzivirira zvikanganiso zvinoitwa nevanhu vazhinji uye uwane iyo chaiyo Highster Nharembozha wozotenga pano.
Ok, ndinodawo kukuratidza wongororo dzandinowana kubva kune vatengi paPhone Spy.
Cell Runhare Kuongorora Kwevabereki - Vabereki Ongororo
Imwe yemapoinzi akakosha ekuongorora kweHotster Mobile ndeyekuratidzira kuti kuongorora nharembozha kunobatsira sei kuvabereki.
Ini ndinowana akawanda akanaka mhedzisiro kubva kuvabereki ongororo.
Nharembozha yekutarisa inobvumira vabereki kuti vatarise yavo Android kana iPhone kushandisa uye vowana zvese matambudziko akavanzwa uye ita semubereki. Vashandisi vakandiudza kuti Highster yevabereki app inovabatsira kuti vanzwisise mwana wavo uye zvavanoda.
Zvakare, kuongororwa kwevabereki kunoratidza izvo Highster inoshanda kwazvo mukuvabatsira ku:
Ziva kuti mwana ane matambudziko kuchikoro (mamakisi, kushungurudzwa, chisimba uye nezvimwewo).
Tsvaga mwana anonyepa.
Tsvaga zvinangwa zvemwana (pati, kuputa, kusiya fomu kumba uye nezvimwewo).
Dzidza nezve mwana hasha uye chisimba maitiro kune vamwe.
Pakutanga kweHowster Mobile kubvunzurudza, ndinokuratidza zvizere rondedzero. Zvese Highster maficha anogona kushandiswa kunevabereki kuongorora tarisiro.
Ongororo dzevabereki dzinonongedza maficha epamusoro matatu evabereki:
1. Zvemagariro midhiya uye IM chat yekutarisa
Mazuva ano pasocial media ndidzo nhepfenyuro huru dzekutaurirana. Vana vanoda kusangana vasingazivikanwe vanhu vatsva uye zvakanyanya uye nekuwedzera ivo vari kusvika kune vezvenhau shamwari.
Sezvo isu tese tichiziva izvi zvinogona kuve zvine njodzi. Unobvumirana nazvo here?
Zvakanaka, hapana nzira yekuti vana vawane shamwari yepamhepo zvinangwa chaizvo. Ruzivo rwevabereki runogona kukubatsira kufungidzira kuti chimwe chinhu hachina kunaka uye kudzivirira njodzi mberi. Zvakare, zvakavanzika zvakawanda zvinogona kuwanikwa nekutarisa pasocial media kutaurirana kwemwana wako.
Chinhu ichi chinogona kukubatsira iwe mukutarisa kwako kuda?
2. Call uye SMS matanda zvichiongororwa
Zvakadaro, kufona neSMS matanda maficha akakosha pakuongorora kweumwe munhu zviitiko. Vamwe vabereki vanoti mune Highster ongororo yekuti kuona kufona kubva kunhamba dzisingazivikanwe ndicho chinhu chinonyanya kubatsira.
Zvakanaka, haungabvumirani. Rudyi?
Matanda eSMS anobatsirawo nekuti panofanirwa kutumirwa kana kutambirwa vashandisi vanoshandisa mameseji eSMS kuitumira. Zvakare, mune dzakawanda zviitiko, iwo meseji unobva wabviswa asi fungidzira kuti chii…
Highster achaburitsa ndokuona dzadzimwa meseji uye imi muchakwanisa kuzviona. Zvinonzwika zvakanaka, handizvo here?
3. Internet kuongorora kuongorora
Vabereki vanongedzera internet kubhurawuza kuongorora seimwe yeakanakisa ficha iyo inoratidza iwe zvaunofarira zvemwana wako. Kana iwe ukaona kuti mwana wako anofarira zvimwe zvisina kukodzera zvemukati yezera ravo iwe unoziva kuti chimwe chinhu hachina kunaka.
Zvakare, ongororo dzinoratidza kuti chiitiko ichi chinobatsira vabereki kuti vanzwisise zviri nani yavo mwana anoda uye vanogona kugadzirisa zviri nani maitiro ekurera. Unoda here chimiro ichi?
Nhare mbozha Kuchengeta kweMhuri Dziviriro - Mhuri Kudzivirira Ongororo
Isu tese tinoziva kuti hatisi kurarama munyika yakanaka. Unobvumirana nazvo here?
Vazhinji vashandisi vanoziva izvo uye ndosaka Nhare Spy dzichiwana ongororo zhinji umo vashandisi vanoshandisa nharembozha iyi app ku tsvaga chokwadi uye kuchengetedza mhuri yavo. Vashandisi vanoti iyo Highster app Anobatsira kwavari ku:
Tsvaga iyo chokwadi icho nhengo yemhuri inoviga kubva kwavari.
Tsvaga matambudziko avakange vasingatomboziva.
Iva nechokwadi chekuchengeteka kwemhuri.
Chinhu chakanakisa chinobatsira vashandisi mukutevera basa ndeye GPS nzvimbo yekutevera chinhu. Iyo GPS nzvimbo yekutevera ndiyo yepamusoro kwazvo ficha iyo inokutendera iwe kuti uone nharembozha nzvimbo munguva chaiyo.
Paunoteedzera nharembozha nzvimbo uye chimwe chinhu icho Highster chinokutendera iwe ipapo unozove neicho chizere kuona mune mumwe munhu zviitiko uye iwe unogona kuwana nekudzivirira maitiro mazhinji asingadiwe. Izvi zvinonzwika zvine musoro kwauri here?
Kuchengeteka Kwemhuri Yako Kungoriwo "Kurota"?
Eya, vamwe vanhu vanofunga kuti kuchengetedzwa kwemhuri chinongova chiroto uye vamwe vanhu vanoita chero zviri musimba ravo kuona kuchengetedzeka.
Ndinoziva dzimwe nguva haugone kuita chero chinhu. Rudyi?
Zvakanaka, the kudzivirira kunowanikwa kwese kwese uye zvine hungwaru kuzvidzivirira chero iwe uchigona uye kuziva. Ndokusaka Nhare Spy app chingave chishandiso chakakura chekudzivirira maitiro asina kufanira kuti aite uye kuchengetedza mhuri yako.
Ok, ikozvino ngatione kuti Highster ingabatsira sei vashandirwi mukutarisa nharembozha kukambani yavo.
Cell Runhare Kuongorora kweMakambani - Vashandirwi Ongororo
Vashandirwi vanosiya Highster Mobile ongororo pamusoro pekutariswa kwefoni kumakambani avo. Mukana wakakura unonongedzerwa nevashandirwi ndiyo rezinesi reupenyu.
Izvi zvinoita Highster mhinduro yakachipa pane iyo tarisa vashandi mafoni.
Zvakare, mune ino Phones Spy Highster Mobile Ongororo, ini ndoda kunongedza zvimwe zvakanaka zvinonongedzwa nevashandirwi mukuwongorora Zvakanaka, chinhu chekutanga iwe chaunofanira kucherechedza ndechekuti vashandirwi vanoshandisa ichi chishandiso chete nekuti chinovapa iwo mamwe mabhenefiti.
Vashandirwi vanosiya mabhureki umo mavanotsanangura kuti sei Highster inobatsira kwavari ku:
Zvirinani kuronga vashandi nguva.
Wana budiriro yepamusoro yevashandi.
Nzwisisa zvirinani tsika dzevashandi uye zvavanofarira.
Zvakanaka, iyo Highster spy software inogona kushandiswa nyore nyore kutarisa mafoni-ane mafoni uye iwe unogona kudzidza zvakawanda nezvevashandi vako. Ruzivo urwu runogona kukubatsira semuridzi wekambani uye bhizinesi rako. Mune Highster Mobile ongororo zvinyorwa, unogona kuona kuti kuongorora kwevashandi nharembozha kunogona…
… Kudzivirira kudonhedza kwedata. Zvakanaka kana iwe une app senge Highster saka ichokwadi.
Iyi Anwendung inogona kukupa iwe kuona kuzere mu zviitiko zvevashandi vako mukati nekunze kwenzvimbo yebasa. Unobvumirana nazvo here?
Kuchengeta Vashandi Nhare mbozha - Makambani Ongororo
Kunyangwe iwe uine fleet uye iwe uchida kuteedzera zviitwa zvevashandi vako kana iwe uine vatengesi uye iwe uchida kuteedzera zvavanoita, Highster ndeye kuchipa uye isingadhuri mhinduro yako.
Iwo mafambiro ekutsvagisa zvikepe anoratidza kuti iyi purogiramu inopa makambani nzira dzekuti:
Tevedza vashandi veApple uye iPhone nhare mbozha.
Tevera vashandi nzvimbo nenguva chaiyo.
Teedzera mutengesi mafoni, nzvimbo uye inoshanda nguva.
njanji GPS nzvimbo dzemotokari nevashandi panguva imwe chete.
Saka kana iwe uchitsvaga nzira dzekutevera pasi mushandi kana nzvimbo yemota, iyi app ndeye hwose uye mari-inoshanda Solution.
Zvakare, mune iyo Highster Mobile ongororo, iwe waigona kuona kuti iyi app inokupa iwe nezvakawanda zvekumberi zvekutevera zvivakwa zvaunogona kushandisa kuwana chaiyo-nguva nzvimbo nguva dzese uye zvakare nezvimwe nhare mbozha zviitiko. Saka kana uri kutsvaga…
… Yevashandi yekutevera system Highster Mobile yakakodzera kufunga nezvayo. Rudyi?
Highster Anoshanda Here? Phones Spy Ongororo Mhedziso
Muchikamu chino chekuongorora kweHotster Mobile, ndinokuratidza kuti sei anoita Highster basa uye mune dzimwe nguva nei zvichidaro haishande. Sezvo ini ndakazviudza kuti zvishande kana ndikachiyedza pane Android nhare mbozha uye mune ino ongororo iwe unogona kuona mhedzisiro.
Nekudaro, kana iwe ukatenga kana kukopa iyo app pane isingavimbike sosi ipapo iwe unogona kuwana scam app.
Saka chenjera uye uzvitenge pamasaiti anokupa iwe neruzivo rwakawanda senge…
… Nezvimwe zvinhu zvinobatsira. Kuti udzivise njodzi, zviponese nguva nemari zvitenge pano paunowana zvese zvaunoda kuti ubudirire kutanga kuongorora Android uye iPhone zviitiko.
Ndekupi kwaunogona kuona iyo Highster inoshanda proofs?
Icho chiratidzo chakanakisa cheHighster anoshanda ndeye Highster Mobile ongororo zvinyorwa. Ndakaverenga wongororo dzakawanda paInternet uye zvakare ndinofanira kukuyambira kuti kune zvinokwikwidza zvigadzirwa uye dzakawanda dzisina kuvimbika ongororo.
Saka muHighster Mobile kuongorora kuongorora, ndinonongedzera ruzivo rwakaunganidzwa narwo Nhare dzeSpy vashandisi feedbacks like:
Yevabereki wongororo feedbacks
Vashandirwi vanoongorora kunetseka
Makambani anoongorora zvekare
Pandinopfupisa zvese ndinogumisa kuti Highster haidhuri uye inodhura-inodhura nhare mbozha zvichiongororwa uye club Anwendung yevabereki pamwe nevashandirwi.
Nzira yekutenga Highster Mobile Spy Software
Chinhu chekutanga chaunofanirwa kuita kana iwe uchida kushandisa aya Phones Spy software ndeyekutenga iko kunyorera. Pakutanga kweHotsterster Mobile kutenga wongororo, ndinoda kukupa mhinduro kumubvunzo mumwe wakakosha. Kutanga, ndotenga kupi software yacho?
Unogona kuitenga nekudzvanya bhatani re 'Tenga' peji ino, Homepage kana pa Highster Mobile Kutengesa peji.
Mushure mekudzvanya bhatani re 'Tenga', iwe unozodzoreredzwa kuBlueSnap yakachengeteka kutenga peji.
Ikoko iwe unogona kuona iyo yekutenga maitiro echishandiso. Munzvimbo yepamusoro yechiratidziro, pane nhanho nhatu dzinobatanidzwa mukuita uku: iyo Ruzivo Ruzivo, Ruzivo rweMutengi, Ruzivo rwekuwedzera, uye ruzivo rweKadhi rechikwereti.
Maitiro Ekubudirira Kupedza Highster Kutenga Maitiro mu4 Nyore Matanho?
Saka munhu wese anoda kupedzisa Highster kutenga nzira zvinobudirira. Ndizvozvo here? Ndokusaka ini ndichida kutsanangura zvakatsiga nhanho dzese mune ino Highster Mobile yekuongorora chinyorwa kuti paizove pasina zvakavanzika zvakavanzika.
Saka ngatitangei nhanho yekutanga.
1. Raira ruzivo rwekuongorora
Padanho rekutanga, iwe unogona kuona iro rekutanga ruzivo nezve chigadzirwa chaunoda kutenga. Izvi zvinosanganisira zita re software, huwandu kureva. mangani marezinesi aunoda kutenga, mutengo pachikamu uye huwandu hwese hwaunoda kubhadhara. Kune zvakare maviri mari dzakavanzika iwe unofanirwa kuziva nezve:
Raira chigadzirwa paCD - chinosanganisira kutumira kune imwezve $ 11.90.
Yakawedzerwa kurodha warandi - back up yemafaira ese akachengetwa pane yako epaneru pani.
Ndingakurudzira kuti uncheck mabhokisi aya kuitira iwe usabhadhara kune aya masevhisi kana iwe usingaade iwo.
Kune rimwe divi, kana iwe uchida kutora chigadzirwa paCD kana uine backup nzira iwe unogona kusarudza iyo. Ini handioni chinangwa chekuve neCD nekuti Highster spy app iri uye chigadzirwa chechigadzirwa uye mafaera ese anogona kutorwa pasi nyore nyore kubva kurunhare yekuburitsa iwe yaunopihwa pane yako tsamba kana uchinge watenga iyo app.
Zvakare, kana iwe ukamira kuongorora Android kana iPhone zviitiko saka ndinokufunga iwe pakupedzisira zadzisa rako rekutarisa basa uye iwe unoda kumira saka hapana chikonzero chekuchengetedza. Izvi zvine musoro here kwauri?
2. Yevatengi ruzivo rwekuongorora
Iri ndiro danho rechipiri mukutenga kwauchazoda kuzadzikisa iyo ruzivo runodiwa yekutenga, senge yako…
… Pauchagamuchira kiyi yako yelayisensi, download link, uye neruzivo rwese rwunodiwa. Sezvo iwe pamwe uchiziva izvi zvinodikanwa kune imwe neimwe yekutenga yawakagadzira online.
3. Ongororo yeruzivo yekuwedzera
Pano iwe uchafanira tarisa bhokisi rekutarisa. Bhokisi rekutarisa nderinotevera "Ndinobvumirana neMitemo yeSevhisi uye Refund Policy".
Saka pano iwe unobvuma kuti iwe unoverenga iyo Terms of Service uye Refund Policy. Izvi ndizvo zvinodiwa pese paunotenga chimwe chigadzirwa saka chiripo hapana chinoshamisa mukutenga uku. Zvakare, mune zvinyorwa, iwe unopihwa zvinongedzo kune izvi zvinyorwa kuti iwe ugone kuzviverenga usati watarisa bhokisi rekutarisa.
4. Kiredhiti kadhi ruzivo rwekuongorora
Ok, ichi chikamu chinonyanya kufadza mukutenga Highster ongororo. Sei?
Zvakanaka, ini ndinowana mibvunzo yakawanda uko vashandisi vanoda kudzidza zvakawanda nezve nzira yekubhadhara. Saka chinangwa changu chikuru ndechekukuratidza pano inova nzira dzeHighster Mobile dzakatsigirwa dzekubhadhara. Iyo chete nzira inotsigirwa neBlueSnap chikuva chaunotenga iyi Anwendung ndiyo kiredhiti kadhi nzira dzekubhadhara.
Nekudaro, iwe unogona kusarudza pakati pemakadhi mazhinji echikwereti.
iwe unogona kutenga Highster Mobile spy software ne:
China Union Bhadhara,
Iko kune zvakare mukana wekuti sarudza mari iyo iwe yaunoda kushandisa, zvinoenderana nenzira yekubhadhara yaunosarudza.
Kutenga kunogona kuitwa pa chero nguva kubva chero kupi kumativi ose enyika.
Iyo kambani haina kupa dhisikaundi makuponi ekushandisa kwavo. Zvakare, hapana yemahara kuyedzwa kana imwe nzira yekusunungura kurodha nhare mbozha software pasina kubhadhara.
Izvo Zvaunofanirwa Kuita Kana Uchinge Uchaisa Nzvimbo Order…
Mushure mekunge maita nhanho iyi nekusimbisa mubhadharo, muchakwaziswa neyekupedzisa skrini. Uku ndiko kusimbiswa kuti odha yacho yaiswa. Iwe unofanirwa kumirira maminetsi mashoma kusvikira iwe wagamuchira maemail ayo anoda ndokuendesa kumberi kuburikidza neyakagadziriswa maitiro.
The maemail aunogamuchira vari:
Highster Nhare Yevatengi Sevhisi
Mune email yeHighster Mobile Customer Service, unogona kuwana online urongwa uye mubhadharo mashoko. Mune email yekusimbisa, unogona kuwana ruzivo rwese iwe achada ye download download, yakachengeteka online control panel chinongedzo, chinongedzo chevatengi chinongedzo, zita rekushandisa, password uye kiyi yelayisensi.
Kune izvo zvaunoda zita rekushandisa uye password?
Chinyorwa Chidiki Chinodaidzwa Highster Online Kudzora Panel
Saka iko kutenga Highster Mobile kudzokorora hakusi kungoita yekutenga nharembozha app. Ini ndaida kuita kuti zvive nyore kwauri saka ndakazviita seongororo yezvinhu…
… Izvo iwe unoda kupfuura rwendo rwako rwekutarisa. Kana chako kutenga chapera, uchagamuchira email yekusimbisa kwaunogona kuwana rako rekushandisa uye password. Ruzivo urwu runodiwa kuitira kuti upinde mukati mako wakachengeteka online control panel sezvaungaona mumufananidzo wepikicha.
Unogona kuwana Highster control panel login peji neiyi link:
Pane iyo skrini pazasi iwe unogona kuona iyo dashboard yepamhepo control panel. Mushure iwe dzishandise Software ari kubaya dzenhare ipapo mashoko ichatanga kuratidza kumusoro pano. Saka iyi account yako yepamhepo.
Paunopinda mairi uchaona zvese yakaburitswa zviitiko kureva. maficha andinokuratidza pakutanga kweiyo Highster Mobile yekuongorora chinyorwa.
Saka heino skrini ye yako Nhoroondo.
Phones Spy Kuenderana Ongororo - Anoshamisa Rondedzero yeApple & Apple Midziyo
Muchikamu chino cheHursterster Mobile ongororo, ini ndoda kukuratidza mhinduro pane ese mibvunzo yekuenderana kuti iwe uve nazvo.
Vazhinji vashandisi vanondibvunza mibvunzo yakaita seiyi:
Highster inotsigira here chimwe chigadzirwa kubva kuSamsung S, Cherekedza, A kana J dzakateedzana?
Iyi spy app inotsigira here imwe kifaa kubva kuHuawei Mate, P, Y, Nova akateedzana?
Highster inotsigira imwe Apple iPhone kifaa here?
Saka pano ini ndoda kukuratidza kuenderana kweHostster uye kukupindura pamibvunzo yese yaungave unayo. Ok, ngatitangei tione kuongorora kweHostster Android kuenderana.
Ongororo ye Highster Android Kugarisana
Iyo inonyanya kushandiswa smartphone chikuva mupasi mazuva ano ndeye Android.
Highster inotsigira zvizere iyo Android-based smartphone zvishandiso. Izvi zvinoreva kuti kunyangwe chishandiso cheApple chakagadzirwa neSamsung, Huawei, LG, HTC, Xiaomi, Lenovo, ZTE kana etc.Ichazotsigirwa neiyi spy app.
Ndinoda kunyanya kucherechedza kuti haufanire kuzvibvunza iwe kuti uchaita inotsigira:
Samsung Galaxy S9 kana S9 +,
… Kana chero chimwe chinhu chishandiso. Zvino iwe zvechokwadi unoda kubvunza kuti nei zvakadaro… Handiti?
Zvakanaka, imhaka yekuti Highster achashanda pamidziyo yese yeApple kubva kuApple OS vhezheni 3 kusvika kumusoro. Saka iyi spy app izere rutsigiro Android mafoni pamwe nemahwendefa. Zvinonzwika zvakanaka, handizvo here?
Iwe unofarira kuongorora kweHowster iPhone kuenderana? Kana zvirizvo mumasekondi mashoma iwe uchaona inoshamisa Apple chishandiso rutsigiro runyorwa.
Ongororo ye Highster iPhone Kuenderana
Yechipiri yakanyanya kupararira smartphone chikuva iApple iOS uye inoshandiswa pane zvishandiso zve iPhone ne iPad.
Saka mukuongorora kweHighster Mobile, ndinofanira kutaura kuti mamiriro akafanana anoshanda kuApple pamwe nemidziyo yeApple. Saka iwe unofanirwa kutsvaga iyo iOS inotsigirwa vhezheni, kwete chishandiso.
Iyo Highster Mobile spy ikozvino inotsigira ese maPhones kubva pa iPhone 5 kusvika kumusoro.
Izvi zvinoreva kuti ese mavhezheni eIOS kubva kuIOS 7 kuenda kuIOS 12 anotsigirwa futi. Iyo Highster app iri inogara ichikwidziridzwa uye ndicho chikonzero chikuru nei zvese zvitsva…
… Android neIOS vhezheni zvinotsigirwa zvizere uye nei Highster ari iyo chinonyanya kushandiswa iPhone uye Android yakashandiswa nharembozha spy app.
Maitiro EkuDhawunirodha nekuisa Highster Mobile Spy pane iyo Target Runhare
Muchikamu chino chekuongorora kweHotster Mobile, ini ndoda kukuratidza maitiro ekurodha pasi uye kuisa iyo foni spy software pane yakanangwa foni. Yakanangwa foni ndeye Android mudziyo. Kunyanya kutaura ndanga ndichishandisa Samsung Galaxy S7 ine Android 8.0.0 OS vhezheni.
Haisi pane inoenderana rondedzero asi sezvakataurwa, zvese Android uye Apple mafoni inotsigirwa.
Saka kuti utore software, ndinoshandisa nhare mbozha. Unogona kusarudza pakati Kuiswa kwePC zvakare asi ini ndinokurudzira iwe kuti ushandise iyo browser nzira nekuti inokurumidza. Zvakare, iwe unogona kushandisa yakajairwa browser application iyo iyo nhare mbozha ine kana chero yechitatu bato browser.
Mukutsvaga kwebrowser, iwe unozofanirwa kuisa iyo yekurodha chinongedzo kureva. kero yewebhu. Mune email yekusimbisa, iwe unopihwa iwo mirairo.
Ndine chinongedzo kune Highster Nhare huru yekuisa menyu kwandakawana chinongedzo chekuburitsa.
Saka kana iwe ukapinda chinongedzo, iwe uchaendeswa kune Highster Mobile intro-main kuisa menyu. Iyo webhusaiti iri nyore, uye inoita senge mune iri pazasi skrini. Pane zvitatu zvingasarudzwa: Android, APPLE, uye BLACKBERRY KUSVIRA (sarudza kurudyi kubaya foni chikuva). Ikoko iwe unozopihwa nhanho nedanho mirairo.
Highster Mobile intro yekumusoro yekuisa menyu
Paunosarudza imwe, wobva wasarudza iyo yaunoda kuisa. Iwe une sarudzo yekusarudza nharembozha kana piritsi. Mune ino kesi, isu tinosarudza nhare mbozha kuongorora uye mushure meizvozvo, iwe unofanirwa kutevedzera nhanho nhanho mirairo kuti uise Highster Mobile software pane yakanangwa foni.
Kana iwe ukatevera nhanho nhanho mirairo, saka kumisikidza kuri kukurumidza uye nyore.
Mune masekondi mashoma iwe uchaona mune ino Highster Mobile ongorora maitiro ekubudirira kurodha pasi nekumisikidza Highster app.
Kune Vanhu Vanoda Kuenderera Nenhare Yekutarisa - Asi Haugone Kutanga
Ok, iyi ndiyo Highster Mobile ongororo uye ndinoda kukuratidza mafambiro andinoita nharembozha kuongorora zvinobudirira. Saka danho rekutanga kupinda mune yakanangwa nhare mbozha webhu bhurawuza (yakajairwa kana chero yechitatu bato browser) Android application download download link:
Tinya "Pinda" kana "Enda" sarudzo. Sezvauri kuona kurodha pasi kwechishandiso chine Akatanga.
Iwe unozofanirwa kumirira mashoma mashoma apo iyo faira iri kurodha pasi pane iyo Android mudziyo. Iyo faira ini yandinodhawunirodha iri chaizvo Highster Mobile apk. Tsvaga iyo yakadzingwa faira (dsx200215.apk). Dhonza pasi iyo "Status Bar" iri pamusoro peiyo Android kifaa skrini, pane faira rine zita: dsx200215.apk.
Sarudzo yechipiri ndeyekuenda kune huru Android foni menyu uye tabo pane "Downloads". Ikoko iwe unogona zvakare kuwana iyo dsx200215.apk faira iyo inotorwa kune yakanangwa mudziyo.
Tinya pane dsx200215.apk faira.
Iye zvino unogona kuona kuti maitiro ekumisikidza anotanga. Unogona kuverenga nezvezvibvumirano izvo chishori chishandiso chinoda uye sezvaungaona zvinoda mvumo yakawanda iyo yakagadzirirwa bvumira iyo yekutarisa app kutora uye kupa ruzivo kune yako internet account.
Tinya "Isa". Mushure mekupedzisa kunyorera maitiro tap "Vhura".
Sezvauri kuona, inotevera skrini inoratidza nzvimbo yaunoda kuisa iyo Rezinesi Kiyi uye tarisa nhamba yefoni. Saka pinda kiyi yako yeRisense, iyo yawakagamuchira muemail yako mushure mekutenga. Zvakare, ita shuwa kuti iwe unopinda License kiyi nemazvo. Mune "Nhare mbozha" munda, iwe unofanirwa kuisa nhamba yefoni yeTARGET PHONE.
Paunenge uri cheki yakapera yekuti iwe wakanyora zvese nenzira kwayo wobva wadzvanya "Tumira".
Kana iwe waita zvese nenzira kwayo, ipapo meseji ichaonekwa "Kunyoresa kwabudirira". Kana iwo meseji usingaonekwe saka iwe unozofanirwa kuisa zvakare kiyi yelayisense sezvo yapfuura License kiyi yakaiswa zvisirizvo. Vimba "Ok" uye kugadzwa Highster Mobile musori kwapera.
Enda kumenu huru yefoni yeApple uye tabo pane "Downloads". Ikoko unogona kuwana "dsx200215.apk" faira iro rinotorwa kune chakanangwa mudziyo. Sarudza iyo uye bvisa.
Aya ndiwo maitiro andakaita kuti ndiise iyo Android spy app pafoni yakaedzwa. Kana iwe uchida kuongorora Apple iPhone kana iPad ipapo maitiro ekumisikidza akati siyanei.
Asi usazvidya moyo!
Ndakagadzira yakakosha gadza chinyorwa kwandinokupa iwe nhanho nhanho mirairo ye…
Kuiswa kwefoni uye piritsi yeApple,
Apple iPhone uye kuisa piritsi,
iPhone spy app Hapana jailbreak hapana gadza Tracking
… Uye unogona kuzviona na kusarudza iyo gadza chinongedzo pazasi.
Yekupedzisira Kurodha pasi uye Kuisa Phones Spy Ongororo Kupedzisa
Ok, ikozvino ini ndoda kunongedza zvakanaka uye zvakashata hunhu hwekurodha pasi uye nekuisa maitiro. Mune Highster Mobile ongororo, ini ndinokuratidza chaiyo yekuisa mirairo yeiyo Android foni yandakagadzirira chinangwa chekuyedza.
Heano ekurodha pasi uye nekuisa ongororo PROS:
1. Inokurumidza kwazvo uye nyore kurodha pasi uye kuisa maitiro
Sezvaunogona kuona muHotsterster Mobile kudzokorora kuisirwa kuri nyore uye nekukurumidza. Aya ndiwo ončy mashoma matanho aunofanirwa kuita uye zvakanyanya, iri tepa rinotevera uye zvakanaka. Kana ndichienzanisa iyi yekumisikidza ino nguva pamwe nedzimwe mhinduro dzeserura kupfuura…
… Hapana spy app ine nyore uye nekukurumidza kuisa maitiro. Saka zvinogona kuitwa neepamusoro tech nyanzvi pamwe neanotanga neyepasi tech ruzivo. Izvi zvinonzwika zvakanaka kwauri here?
2. Inoyevedza gadza interface dhizaini
Iyo yekuisa interface yakagadzirirwa zvakanaka uye nhanho dzese dzakanyatsotsanangurwa kuti urege kupotsa chero chinhu. Zvakare mune yekumusoro yekuisa menyu, iwe unopihwa iwo ruzivo rwakatsanangurwa mirau kana iwe ukabatirira pane rimwe danho
3. Dzimwe nzira dzekudhawunirodha app
Unogona kusarudza pakati pedzimwe nzira dzekurodha pasi programu yacho pafoni. Ndakadzidza kuti kune nzira mbiri dzinovimbika:
Dhawunirodha uye kumisikidza nePC.
Dhawunirodha uye kumisikidza nefoni.
Unogona kusarudza iyo inonyatsokodzera iwe. Sezvawaigona kuona mukutora pasi uye nekuisa Highster ongororo ini ndakasarudza iyo yechipiri nzira nekuti inokurumidza uye nyore.
Heano ekurodha pasi uye nekuisa ongororo CONS:
1. Mirayiridzo inoita kuiswa kwenguva refu
Zvakanaka kana iwe ukaenda kune iyo hombe yekumisikidza menyu, verenga uye uteedzere rairo, ipapo zvinokutorera iwe imwe nguva kupfuura yaunoda. Kana uine nguva yakaganhurirwa saka ndinokurudzira kuti uone mirairo kumberi kuti iwe ugone kuziva matanho ese pamberi.
Paunenge iwe uchinge waziva matanho ese iwe unozogona kuita kurodha pasi uye kumisikidza maitiro mune isingasviki maminetsi matatu. Zvinonzwika zvakanaka, handizvo here?
Uye izvi ndozvazviri hakuna imwe PROS kana CONS yandakawana mukuburitsa uye kuisa maitiro. Kana iwe uine rumwe ruzivo inzwa wakasununguka kutumira komendi.
Ok, ikozvino ngatione Highster Mobile vs mSpy vs FlexiSPY Ongororo.
Highster Mobile vs mSpy vs FlexiSPY Ongororo
Aya ndiwo epamusoro 3 Nhare Yekutarisa maapplication ayo parizvino akanakisa pamusika. Mutengi chaiye Highster Mobile wongororo ratidza kuti chakanakira software iyi ndiwo mutengo. Iyi Anwendung ndiyo inodhura-inoshanda mhinduro kune mumwe munhu nhare yekutarisa.
Saka mune ino Highster Mobile yekuongorora chinyorwa, iwe unogona kuona kuti iyi app ndiyo yakanyanya kunaka:
iPhone inodhura-inoshanda mhinduro
Android nhare mbozha inodhura-mhinduro
Imhaka yekuti Highster ane iyo rezinesi reupenyu yeApple pamwe neye iPhone zvishandiso. Izvi zvinoreva kana iwe uchinge watenga izvo hapasisina imwe yemwedzi kubhadhara, fizi kana chero zvimwe zvinodiwa.
Zvakare, izvi zvinoreva kuti iyo hapana yekutarisa app iyo inokuwanisa iwe mamwe maficha emutengo iwe wawakabhadhara pamusika. Mukana wechipiri wandinoda kunongedzera muHighster Mobile vs mSpy vs FlexiSPY ongororo yakasarudzika maficha.
Awesome Unique Monitoring Spying Zvimiro Zvaunoda Kuti Uzive Nezve
Mukana wechipiri wandinoda kunongedzera muHighster Mobile ongororo maficha. Iyi yekutarisa software ine mashoma akasarudzika maficha ayo asingawanikwe nechero imwe yemakwikwi chigadzirwa. Kutanga imwe yakasarudzika yemagariro midhiya maficha senge:
Vakaverengwa nhume kuongorora
Izvi zvinoreva kuti kana iwe uchida kunosora pane imwe Twitter uye Kik nhume iwe uchafanirwa kusarudza Highster. Ongororo dzekudzokorora dzinoratidza zvakare kuti Highster hapana jailbreak uye hapana yekuisa chimiro, pamwe nekuvanzika kwekamera activation, zvakare iri chikonzero nei vatengi vachisarudza iyi app.
Aya maficha haashome uye anowanikwa neiyi software yekutarisa.
Kune Vanhu Vanoda Iyo Yakareruka uye Inokurumidza Seti Maitiro
Kuyedzwa kwandakaita pane yepamusoro yekutarisisa mhinduro kwakandinongedzera kune yekupedzisira Highster mukana. Ok, sekugara kwandakakuratidza muHghster Mobile ongororo pamusoro, kurodha pasi nekumisikidza zviri kukurumidza uye nyore.
Kana ndikafananidza iyi spy app kurodha pasi uye maitiro ekumisikidza neimwe yemakwikwi chigadzirwa saka ini ndoona kuti iri nyore uye inokurumidza nzira yekumisikidza spy app iri neHostster foni app.
Mimwe mhinduro dzese dzinoda yakawanda nguva uye simba rekumisikidza nenzira kwayo.
Chikamu chechipiri chekuongorora kweHighster Mobile chinokuratidza maitiro ekumisikidza iyo Highster nhare mbozha pa smartphone yako kuti usarasikirwa nechinhu mune rako rekutarisa basa.
Ongororo ye Highster Nhare mbozha App
Kana iwe uchida kuongorora zvainanga foni zviitiko kubva kune yako nhare mbozha kana piritsi, ipapo uchafanirwa kuisa iyo Highster spy foni app pairi. Kuiswa kweapp iyi kuri nyore, nekukurumidza uye zvinotora zvisingasviki miniti. Iyo app inogona kuwanikwa paGoogle Play. Iyi ndiyo mirayiridzo yeApple. Kubva pane yako nhare mbozha enda kuchitoro che "Google Play".
Tinya pane "yekutsvaga" kana "yekukudza girazi".
Zvino iwe unozofanirwa kupinda "Highster nhare" mumunda wekutsvaga uye tinya pane "Tsvaga".
Iyo yekutanga app inofanirwa kuve "Highster Mobile". Tinya pairi.
Tinya pane "gadza".
Tinya pane "Gamuchira". Izvi zvibvumirano izvo spy app inoda.
Tinya pane "Vhura".
Iye zvino spy foni app yaiswa uye iwe unogona kupinda mukati online control panel kubva kune yako mbozhanhare kana piritsi uchishandisa zita rekushandisa nephasiwedi izvo iwe zvawakagamuchira yekusimbisa email.
Iyo huru skrini inochinjirwa nhare mbozha, uye iwe unogona kuona kutaridzika pasi mune iyo skrini.
Pane ino skrini, iwe unogona kuona yekumisikidza menyu.
Ok, chinotevera chikamu cheHighster Mobile ongororo iwe uchaona maitiro ekumisikidza zvese zviri nyore zvekushora.
Sei Kumisa Zvese Zvimiro Nyore? Pane Chimwe Chinhu Chandinofanira Kuziva Nezve?
Mune ino Highster Mobile ongororo, ini ndoda kukuratidza maitiro ekumisikidza zvese maficha uye uwane iyo zvakanakisa kuongorora preformances.
Kubva pane yako online control panel, iwe unogona kuita yakawanda yebasa. Chinhu chekutanga chauchazoda kuita kuona kuti waisa mu maruva ekugadzirisa, ese maficha aunoda ON.
Chinhu chaunoda kuziva nezvacho ndechekuti…
… Kana ukamisa zvinhu zvese ipapo mamwe data akaiswa kuaccount yako uyezve, iyo app inotora yakanyanya kunongedzwa kifaa sero foni bhatiri. Saka kana iwe usingade chimwe chimiro ini ndinokuraira iwe kuti uise mukati mekutema matanda KUSVIRA pane ichi chinhu. Zvakanaka kuziva izvi. Rudyi?
Spy SMS Meseji
Th SMS ficha inoita kuti iwe uone yega yega mameseji eSMS ayo iwo kubaya foni anogamuchira kana kutumira.
Kana munhu akananga inobvisa meseji, iwe ucharamba uchikwanisa kuona zvizere zvirimo kubva kune yako online control panel. Kune ichi chimiro, iwe haufanire kuita chero chakakosha.
Mushure iwe gadza musori chirongwa pamusoro kubaya foni, iwe uchatanga kugamuchira zvose SMS kuti chipfuro foni ane mundangariro, uyewo ose mashoko kuti vakatumira kana kugamuchirwa mune ramangwana.
The spy SMS ficha inosanganisira izvi zvidimbu zveruzivo:
SMS meseji zvemukati,
mhando (inogamuchirwa SMS kana kutumirwa SMS),
Chinhu chakandifadza ndechekuti nekukasira, pandakatumira meseji kune Android nhare ine software yakaiswa, ndakakwanisa kuiona pane yangu kure online account. Ok, ikozvino ngatione Instagram spy ongororo.
Spy kune Mumwe munhu Instagram Meseji uye Mifananidzo
Instagram mameseji uye mapikicha mazuva ano aida kuongororwa maitiro. Vazhinji vashandisi vanoda kutsvaga chokwadi nezve kutendeseka kwemumwe munhu nekusora pane vamwe vanhu Instagram account. Iyi yekutevera inotsigira zvizere chimiro ichi.
Saka sezvaungaona mune ino Highster Mobile ongororo chinyorwa iwe uchakwanisa kuona…
… Uye chikamu chakanakisa ndechekuti zvese izvi zvinopihwa kwauri pasina account muridzi achiziva. Mune masekonzi mashoma iwe uchaona mune ino ongororo zvimwe…
… Nezvenzira yekushora munhu SnapChat Meseji uye anotora.
Spy kune Mumwe munhu SnapChat Meseji uye Anotora
Imwe yeanonyanya kushandiswa magariro app nhasi iSnapChat. Vazhinji vashandisi vanoda kunosora mameseji eSnapChat mameseji uye anotora. Izvi zvinogona kuitwa nyore nyore neiyi software yekutarisa. Iyi software inokutendera iwe kuti uone muridzi Akaundi:
Saka pachave pasina SnapChat zviitiko izvozvo zvichange zvakavanzika kwamuri.
Ini ndinofanira kucherechedza mune yeHostster Mobile yekuongorora chinyorwa kuti kunyangwe kana muridzi weakaundi akabvisa meseji kana imwe data iwe ucharamba uchitora wozviona pane yako online control panel.
Spy pamusoro Mumwe munhu vakaverengwa Messages uye Other Account Activities
Kik Messenger ndiyo inokurumidza kukurumidza Instant messenger pamusika. Kick Messenger inokutendera iwe kusazivisa kutumira mameseji, mapikicha, uye mavhidhiyo.
Iwe zvechokwadi unobvuma kuti iyi nhume app inoda kuongorora uye ndosaka ndichida kukuratidza mu Highster Nhare kuongorora chinyorwa…
… Zvinoitwa neKik Messenger zviitiko zvauchazokwanisa ona pane yako account iri kure.
Izvi ndizvo zvakare yakaipisisa pakarepo meseji painternet nekuti ikozvino mumwe anoziva kuti Kick account ndeyani nekuti hapana zita. Wako vadiwa vana inogona kukudzwa pano saka kana iwe uchida chokwadi iwe unofanirwa kuongorora ayo Kik Messenger mabasa.
Iyi Anwendung inokutendera iwe kuti uone mamwe maonesoni:
Saka neiyi software yekutevera, iwe unozogona nguva dzose spy nezve mumwe munhu Kick Messenger account zviitiko uye hapana chisingazovanzika kwauri.
Mumasekondi mashoma anotevera, iwe uchaona mune ino Highster Mobile kudzokorora zvese nezve mumwe munhu anofona zvichiongororwa.
Spy pamusoro Wemumwe Android uye iPhone Kufona
Ese Android uye iPhone Highster Mobile Ongororo zvinyorwa zvinoratidza kuti vashandisi vari kutsvaga nzira yakavanzika yekushora munhu weApple uye iPhone mafoni.
Iyi app zvakare inotsigira kufona kuongorora saka uchakwanisa kutora ese emumwe munhu weApple uye iPhone nharembozha…
… Kufona matanda senge:
mativi ese ari maviri anodana nhamba,
zuva uye nguva pakaitika kufona,
Zvechokwadi zvevatengi zveongororo zvinyorwa zvinoratidza kuti chinhu ichi chinonyanya kubatsira nekuti vanokuratidza naiye muridzi wefoni anowanzo taura uye kuti yakareba sei. Aso, iwe unogona kuona mazita emativi ese maviri saka panogona kunge pasipo kufungidzira kufona kuti murege kuzoziva.
Ok, ngatione inoshamisa track track foni nzvimbo yekuongorora.
Tevedzera Nhare mbozha Nzvimbo
Track foni nzvimbo iri nyore pamwe Highster Mobile musori App. Mune ino Highster Mobile inoongorora chinyorwa, ini ndoda kuziva kuti iyi app ndeimwe yepamusoro-soro uye inodhura-inoshanda nhare mbozha nzvimbo tracker pamusika.
Pandinoshandisa Highster kuitira kuti ndiyedze pachigadzirwa changu ndinotarisa nzvimbo mbozhanhare kuti ndive nechokwadi chekuti nzvimbo dzese dzandinoshanyira dzichachengetedzwa uye kuburitswa.
Mune online control panel, Highster inobvumidza iwe ku…
ona mumwe munhu nharembozha pamepu
ona mumwe munhu akashanyira nzvimbo nematanda eGPS
kumbira chaiyo-nguva mbozhanhare nzvimbo yekutevera matanda
Nehunyanzvi uhu, ini ndanga ndanyanya kugutsikana. Zvakare, pano muHighster Mobile ongororo, ini ndoda kuziva kuti iyi ndeimwe yeiyo zvakachipa zvakanyanya nharembozha nzvimbo trackers iyo inogona kuwanikwa pamusika.
Saka kana iwe uchifungidzira kuti mumwe munhu haasi kwaanofanira kunge ari kana iye / iye ari kukunyepera, ipapo iyo Highster app inogona kunge iri isingadhuri mhinduro yekuwana iyo chaiyo chokwadi. Haubvumirani nazvo here?
Highster Nhare mbozha Kwete Jailbreak iPad / iPhone Remote Monitor
Highster Mobile iri kusimudzira yavo app uye ikozvino inokutendera iwe nyowani nyowani Highster Mobile Kwete Jailbreak iPad / iPhone Remote Monitor chimiro. Iyi inzira huru yekure kure spy uye monitors pane mbozhanhare isina iyo.
Nekudaro, inowanikwa kune iPhones uye iPads chete. Inoshanda nekutora ruzivo kubva kuICloud backup saka mhinduro iyi inoonekwa seyakanakisa sarudzo kune iyo kure kuisa spy software ye iPhone uye iPads.
Ndinofanira kuisa Anwendung kana ndinofanira kuva foni muridzi uye ndinofanira jailbreak iPhone / iPad?
Ichi chinzvimbo chekutarisa chiri kure hachidi…
… Yechinangwa chipenga. Izvi zvakanakira izvi iPhone yekutevera app zvakanaka. Zvakare, pane zvinodiwa nezvose zviri zviviri maapp uye zvinosanganisira ...
Target Apple id uye password,
iPhone iClodu backup sarudzo yakamisikidzwa.
Izvi zvitatu zvinodiwa zvinodiwa kune maapplication nekuti ivo vachazoda kutora ruzivo kubva ku ICloud. Iyo yekumisikidza maitiro iri nyore kwazvo uye uyu mukana kune ese maapplication.
Iwe unogona kuwana kuona rese danho nedanho maitiro tsananguro pano:
Highster Mobile gadza gwara
Ndeapi maficha achave anowanikwa neiyi isina jailbreak / isa iPhone yekutevera app?
Iyo rondedzero yezviongorori maficha ichave ari mashoma kushoma pane neakaiswa app. Nekudaro, kumisikidza iyo Anwendung iwe uchafanirwa kuita jailbreak iyo iPhone, kurodha pasi uye kumisikidza iyo app inoda nguva yakawanda. Ndinodawo kucherechedza kuti chimiro chemazita chakasiyana nechaizere Highster yakaisa mhinduro chinyorwa chinyorwa.
Ichakupa iwe maficha senge:
SMS (Zvinyorwa Meseji),
Sezvauri kuona apa zvinongova zvinhu zvekutanga asi ini ndoda kuziva kuti iwe hazviiti unoda jailbreak, kurodha pasi uye kuisa iyo app inozo kukuponesa yakawanda nguva uye zvakare kukupa iwe neruzivo.
Kana iwe uchida iwe unogona zvakare kusarudza kuisa izere Highster foni spy app vhezheni pane iyo iPhone uye uwane zvese maficha.
Highster Nhare Yekuongorora 2021 vs Highster Nhare Yekuongorora 2020 vs Highster Nhare Yekuongorora 2021
Muchikamu chekupedzisira chekudzokorora, ini ndoda kugovana newe kuvandudzwa kubva kuHghster Mobile ongororo 2017 uye kutarisira kwandinayo kubva kuiyi spy app muHighster Mobile ongororo 2020.
Ok, ngatitange neizvo zvitsva mu Highster Nhare yekuongorora 2021. Saka spy app inoda kugara ichivandudzwa nekuda kwezvitsva zvinodiwa.
Izvo zvakanyanya kudiwa zviri zviviri maitiro:
1. Android uye iPhone musori maficha
Iwo makasitoma anoratidza mune Highster Mobile kuongororwa kuti yako inoda zvimiro zvitsva. Gore rega rega iyi spy app inovandudzwa nezvitsva zvinonakidza maficha ekuongorora nhare.
Shanduko huru kubva kuHotster ongororo 2017 ndeye iPhone uye iPad Hapana jailbreak, hapana gadza uye hapana yekuwana kushora. Ichi chimiro mazuva ano akanyanya kufambira mberi uye ndiyo chete isina mhinduro yekuwana pamusika.
Chechipiri chinodaidzwa ndezvemagariro enhau.
Iyo Highster timu yakanaka uye vanoshanda nesimba kuverengera nyowani midhiya enhau uye IM chats maficha. Mhedzisiro yacho ndeyekuti izvozvi muHighster Mobile ongororo 2021 iyi Anwendung inotsigira ese anonyanya kushandiswa vezvenhau uye IM chats. Zvinonzwika zvakanaka, handizvo here?
2. New Android uye iPhone yakatsigira OS shanduro
Iyo Android neIOS zvinogara zvichinatsiridzwa uye zvinyorwa zvitsva zvefoni zvinouya nguva dzose.
Iyo Highster spy app inogara ichigadziridzwa saka mhedzisiro ndeyekuti parizvino ese maApple uye iPhone iOS vhezheni zvakatsigirwa zvizere kuti zviongororwe.
Chii chaunotarisira mu Highster Mobile ongororo 2021?
Izvo zvinotarisirwa kubva kuHighster Mobile ongororo 2021 zvakakura. Iyi purogiramu ndeimwe yeanonyanya kushandiswa pamusika uye parizvino ndiyo mhinduro inodhura.
Ini ndinotarisira kuti ichaita mhinduro inodhura kwazvo mune ramangwana. Izvi zvinoreva kuti icha…
ichine rezinesi reupenyu
vane zvitsva zvinotyisa zvekusora
nemutengo mumwe chetewo
Kana isu tikatarisa iyo yapfuura ongororo 2018 uye yazvino ongororo 2021, iyi Anwendung ine yakareba tsika seyese rezinesi software uye inonyatso kuzivikanwa neizvozvo saka hapana chikonzero chekuchinja icho. Haubvumirani nazvo here?
Ndinokutendai nekuverenga Highster ongororo 2021. Ndinovimba une mhinduro dzese dzawanga uchitsvaga.
Zvino ngatione mhedziso yekudzokorora.
Mune ino Phones spy ongororo, iwe waigona kuona yakawanda Highster Nhare dzekutarisa dzakaungana mune imwe hombe Highster Nhare kuongorora. Saka pano ndinokuratidza Highster Mobile:
Dhawunirodha uye gadza ongororo
Pakupedzisira, ini ndoda kuverenga zvese uye kupedzisa nemitsara mishoma.
Iko mukana wakakosha weiyo Highster Mobile app ndeyechokwadi iyo mutengo. The rezinesi reupenyu uye iyo runyorwa rweasori maficha inonakidza. Iko hakuna imwe mhinduro iyo inokupa iwe se as zvakawanda maficha pamutengo iwoyo.
Saka iyo Highster Mobile isoftware inoshanda uye parizvino ndiyo nharembozha yakanakisa Spy isingabatsiri nhare mbozha zvichiongororwa uye nzira yekutevera.
Ndinovimba iyi Highster Mobile ongororo ichakubatsira iwe kuti uwane danho.
Highster Cell Runhare Tracker
Parizvino Highster Haishande
Tarisa mSpy Panzvimbo →
mSpy vs Highster Nhare - Chaiyo Vatengi Kuongorora Kuenzanisa iyo yaunOFANIRA Ona! Unoda kudzidza zvese zvinoshamisa nezve mSpy uye Highster? Reveal ...
Chokwadi chinoratidza FlexiSPY vs mSpy vs Highster Nhare - Ndeipi iri yakanakisa? Iwe une kusahadzika kuti ndeipi software ndiyo Yakanyanya ...
Highster Nhare Ongororo - Highster Nhare iPhone & Android Ongororo Iwe unotsvaga Highster Mobile iPhone & Android Ongororo? ...
Tags: evt17 kupinda, inoshanduka 2021, flexispy apk, flexispy yemahara, kusununguka kusununguka, yemahara mspy, mspy mahara, fonera kufona sms |
66 Comments · Siya Komendi
Ini ndoda kuisa instsll pane Android ZTE prepaid strsight tslk..i handigoni kuwana password yekuisa izvozvi asi kana ini ndichiita pane chero zvinhu zvandinofanira kuita kunze kwekuburitsa maitiro. Chii chandinofanira kuita kujeri kuputsa kana kuidzura? Unonyatsoviga sei humbowo hweirodha faira..uye inoratidza chiratidzo
Iyo rooting uye kuputsa kwejere inzira yakapusa inoda maapplication akasarudzika uye inogona kuitwa nemabatiki mashoma. Kune akawanda emahara maapplication pamhepo. Yako yekuvavarira foni ndeye Android saka iwe unoda rooting uye mune ino chinyorwa, ini ndinotsanangura iyo rooting maitiro:
Iyo Highster Mobile app ine sarudzo yekuvanza iyo yekuisikidza "Chishandiso" icon ine wekure kuraira. Pane online control panel, unogona kuwana rairo iri kure iyo iwe yaunoda kutumira seye meseji kana uchinge wapedza iyo yekumisikidza maitiro uye iyo icon ichavanzwa.
Mhoroi ini ndinogona kuisa iyo App pane yavo iPhone kana ivo vakadzora highster App kuburikidza neapuro chitoro? Ndinoendesa sei iyo App kwavari? Ini handina Appel id kana password. Uyezve dosent snapchat shandira iyo App apo usikker Appel id uye password muicloud back up?
Iwe unogona asi zvinosuruvarisa, iyo Highster Mobile, pamwe nemamwe mafoni mafoni maapplication, haawanikwe muApp chitoro. Ndokusaka iwe uchida kuti jailbreak iyo iPhone kuti ugone kurodha pasi fomu fomu yeinternet kureva. download link iyo yaunopihwa kwauri nekutenga.
Mhinduro yechipiri kuziva ruzivo rwemaapuro uye iri kure track track neHighster pasina kuisa kana kupaza kwejeri.
Ini handina kunzwisisa chikamu chekupedzisira asi kana iwe waifunga kuti SnapChat haishande kana iwe ukasora iPhone neHighster hapana jailbreak uye isina yekuisa ficha ipapo iwe wakarurama. Izvo zvinyorwa zvinyorwa zvidiki zvidiki.
Kuti uwane zvimwe nezve kurodha pasi uye nekuisa maitiro ruzivo tarisa:
Francis Fung anoti:
Chinangwa cheIphone X chinofanira kusainwa pane icloud? Kana ikasaina kusaina kana kuchinjirwa kune dzakasiyana iclound ID, isu tichiri kugona kuongorora spy iphoneX nekushandisa highster?
Mhoro Francis Fung,
Zvakanaka kana iwe ukaisa iyo Highster Mobile pane iPhone saka hapana chikonzero cheiyo iCloud chimiro uye kana tariso ikachinja chero chinhu iwe uchazokwanisa kuona zviitiko zvese zviri kure pane yako online account.
Kana iwe uri kushandisa hapana jailbreak uye hapana gadza Highster Mobile ficha kupfuura iwe zvauchazofanira kuziva Apple id nePassword.
Mhoroi, pane chero humboo hwekuisa hunoratidzwa pane yakatarwa Nhare mbozha? Ini ndoda kuongorora Samsung Galaxy S6.
Ndatenda nemubvunzo wako. Highster Mobile inotsigira zvakakwana kuongorora kweiyo Samsung Galaxy S6 saka iwe unozogona kuenderera nekutarisa pasina matambudziko.
Chimwe chezvinhu zveHighster isingaonekwe yekutarisa iyo inosanganisira kutumira iyo app kumashure. Saka kana iwe ukaisa iyo app iwe uchazoda kutumira yakavanzika rairo kune yakanangwa Samsung Galaxy S6 nharembozha. Iwo wakavanzika kuraira unoguma nekutumira kweiyo Highster app kumashure uye kushanda wakanyarara kureva. mode isingaonekwe.
Ndeipi nzira yakanakisa yekudzura Samsung Galaxy Cherechedzo 5 kuti ushandise chirongwa chako? Kune akawandisa masayiti / ruzivo rwepamhepo kuona kuti ungadzura sei foni.
Rooting ndiyo nzira yakapfava iyo iwe yaunogonesa kupihwa kweyeye superuser kodzero (akasarudzika mvumo) kune Phones Spy app. Nemvumo iyi, iyo Phones Spy app inozokwanisa kuwana epamberi maficha, kuburitsa ruzivo rwese uye kurodha pasi kwauri pane yako online control panel.
Ini ndakagadzira yakakosha chinyorwa nezve rooting kwaunogona kuwana ruzivo rwese. Zvimwe pano:
Martin S anoti:
Mhoroi ndakasangana nenyaya inotevera: ndakatenga iyo software yeiyo iphone vhezheni, uye ndinowana email yeiyo isiri yejeri yakavhunika iphone iyo inongondipa mukana wekuwana mashoma maficha. Asi ini ndine yangu iphone yakaputsika uye ndinoda kuwana kune ese maficha. Ini handisi kutsvaga chinongedzo chekurodha pasi app kufoni yangu muemail yandakawana. Ndiri kuda kurodha pasi app uye ndinakirwe neese maficha andakabhadhara.
Ndatenda nemubvunzo wako.
Kana iwe ukatenga iyo HighsterMobile uye ukatora rezinesi kiyi saka hapana dambudziko. Unogona kudhawunirodha Highster Mobile app ye iPhone kubva pane iyi link:
Nezve nhanho nhanho, Highster yekumisikidza mirairo inoshanyira Mafoni Spy kuisa magwara.
Wesley Brown anoti:
Mhoro izvo zvandinoda kuziva ndezvekuti NDINOFANIRA KUVA NEI
TARGETED CELL PHONE? Ndinofanira here kurodha pasi app yacho kune yakanangwa nharembozha kana ini ndinongoda yakanangwa nhare mbozha yenhare yandinoda kuongorora?
Mhoro Wesley Brown,
Kana kubaya foni iri iPhone saka unogona kuongorora pasina kuisa Anwendung. Nekudaro, iwe uchafanirwa kuve neApple id uye Apple password.
Kana kubaya parunhare kuri Android nharembozha saka uchafanirwa kurodha pasi uye kumisikidza Anwendung pairi.
Zvakare mumatanho ekumisikidza, ini ndakanyora ese matanho ekumisikidza…
- uye iPhone
… Zvakavakirwa zvishandiso zvandakaita pandinoisa iyo app pazviri.
Chii chingaitika kana mushandisi akaita "fekitori dhata reset" pane yakanangwa foni. Ko software yacho ichadzimwa parunhare here? Mhinduro yako inokosheswa.
Hongu kana mushandisi akaita iyo fekitori kumisikidza pane yakatarwa foni, inozodzima ese maapplication parunhare kusanganisira yekutarisa app. Iyi ndiyo chete nzira yekubvisa zvachose kuongorora app kana usina kuiisa asi ziva kuti data rese parunhare runorasika.
Iyi software inozoteedzera iwo mameseji kubva kune yekutumira mameseji senge zvinyorwa izvozvi nezvimwe? Ratidza zvemukati zvemukati uye zvese.
Iyo Highster inogona kusora mameseji. Ichakupa iwe ne:
Iyo inogona zvakare kuteedzera mazhinji Masocial network uye IM chats. Ikoko Highster nharembozha ichatorawo ruzivo rwese nezve hurukuro uye iwe uchave unokwanisa kuvaona kubva kune yako epamhepo control panel.
Michael Horne anoti:
Ndinoita sei kuti isaonekwe? Ini ndinosunungura iyo kubva kubaya foni? Iyo malware maapplication ari kuona iyo.
Mhoro Michael Horne,
Kana ukangoshandisa iyo yekuongorora app, iyo software ichaiona. Ingodzvanya haina kukuvadza uye kuti unoida. Paunenge iwe wapedza kuisirwa, tumira Chakavanzika SMS kuraira kuti iyo yekutarisa app isingaonekwe pane yakanangwa foni. Kana ikangoenda kumashure haichazoonekwazve uye software haizokwanise kuiona zvakare.
Mhoro. Ini ndinofanira kuziva kana highster inonyora nhaurwa dzese pafoni yakanangwa kana ndinongogona here kuona iro danda rekufona
Iwe haugone kuteerera kune hurukuro. Nekudaro, iwe uchave unokwanisa kuona kufona matanda ayo anosanganisira:
Kana iwe uchida kurekodha nekuteerera kufona ini ndakakurudzira iwe kuti ushandise FlexiSPY app. Zvimwe pano:
Kana ini iine icloud yekushandisa id uye password zvinoita senge HIGHSTER ndiyo mhinduro yakanakisa kwandiri. ASI MUKURU MUBVUNZO…. Kana mushandisi ID kana password ichinja ndinozoziviswa kuitira kuti ndikwanise kuzvishandura kuitira kuti HIGHSTER irambe ichishanda kana ichaita highster isingabatsiri ???
Zvakare yekupedzisira yekuvandudza pane iyo IPHONE 6 uye 7's ishanduro 10 kana zvakadaro. Iyi software ichaenderera ichishanda here?
Ndinotarisira mhinduro yako.
Kwete, haugone kuona shanduko. Zvikumbiro zvinotora apuro ID uye mapassword mapassword anotsemuka anowanikwa neapp iyi:
Nekudaro iwe uchave unokwanisa kuenderera neHighster Mobile uchishandisa uye zvakare, izvi maficha zvinokutendera iwe kuongorora ese maPhones anosanganisira iPhone 6 ne7 neese iOS shanduro.
Amy Huynh anoti:
Zvinoita here kutarisa kumusoro kune zvekare mameseji meseji mwedzi miviri yapfuura? Kuzviuraya kwemwanakomana wangu kwakandisiira mibvunzo yakawanda isingazivikanwe nekuti akaparadza foni yake zvachose. Mhinduro yako inokoshesa zvikuru!
Mhoro Amy Huynh,
Zvese spy software zvinogona kubvisa mameseji ekare kubva mundangariro yefoni nekuti kana ukadzima meseji yacho ichiri mundangariro yefoni. Kazhinji, Monitoring maapplication anogona kutora angangoita mazuva manomwe meseji. Ino nguva, iyo nguva inogona kusiyanisa uye zvinoenderana nefoni kuenda kufoni. Saka kana iwe ukaisa yekutevera app pane yakanangwa nhare iwe unogona kutora dzadzimwa mameseji mune angangoita mazuva manomwe.
Mumwe mubvunzo usati watenga software. Kana isu takarasa kana kukuvadza nhare zvakadii nezve rezinesi redu? kana tikashandisa nhamba imwe chete yenharembozha pane imwe nyowani kana imwe nhare saka zvinoita here kushandisa rezinesi rimwe chete kana tinoda kutenga rezinesi nyowani?
Iyo Highster Mobile Spy app inouya kune imwe nharembozha chete. Kana paine chikonzero chero iwe ukachinja icho chakanangwa foni, uchafanirwa kutenga iyo yekuwedzera rezinesi. Saka, zvinosuruvarisa, hauzokwanise kuteedzera imwe foni ine iyo yakafanana nhamba. Nekudaro, kana iwe uchida kuteedzera imwecheteyo nhare iwe unozogona kusunungura uye kuiisa isina muganho wenguva.
Rachel Broussard anoti:
Ini ndakaisa iyi software pafoni uye inoshanda nemazvo… izvo zvataurwa, hazviratidze uye zvakatumira mameseji chete akagamuchira meseji… chero mazano nei?
Mhoro Rachel Broussard,
Wakagonesa kuongorora kwemavara mameseji pane sarudzo sarudzo?
Mhoroi, ndanga ndichingodzungaira. Ndiri kuona vanhu vazhinji pamawebhusaiti vachiti irayisensi yeupenyu ye $ 69 chete .. zvakadaro panzvimbo yako inoti $ 29 pamwedzi. Kunze kwekunge ndiri panzvimbo isiriyo. Unogona kujekesa?
Kwete, pano paPhones Spy iwe unogona kutenga Highster Mobile hupenyu rezinesi ye $ 69.
Kana zviri zvekutarisa facebook uye facebook messenger - unogona here kuona meesseges ese kubva kunzvimbo mbiri uye chero mafoto kana mavhidhiyo akatumirwa uye akatariswa kunyangwe hazvo chinangwa phine chisina kugadzira kana kurodha pasi? Uye izvi zvinoshandawo kuwhatsapp futi?
Highster Mobile rutsigiro meseji, facebook messenger meseji uye dzimwe dzakawanda IM chats seWhatsapp, Viber nezvimwe.
Kana meseji yatumirwa / kugashirwa Highster inozoibvisa. Izvi zvinosanganisira mifananidzo uye mavhidhiyo zvakare. Pane rako repamhepo rinodzora pani, iwe unozogona kuona izere hurukuro nemagwaro ese, mapikicha, uye mavhidhiyo zvisinei kana tarisiro ichivatarisa kana kwete.
Iwe unofanirwa kuisa kodhi yenyika yePhilippines nhamba yefoni? +63 uye nhamba yefoni kana chete nhamba yefoni
Izvo hazvina kutaurwa. Ini ndinopinda iyo yakanangwa foni nhamba pasina nyika kodhi.
Ini ndoda kuziva kuti chii chiri rooting, uye ndinofanira kudzura foni kuti nditeedzere FB, Whatsapp? nezvimwewo
Iwe unogona ndapota ndiudze sei mabviro angu ASUS zenfone. nhanho nhanho zvaizobatsira chaizvo
Kutora midzi kuri kungotyora zvisikwa zvisati zvaiswa pane yako kifaa. Saka chinhu chega chichaita kunanga runhare ndechekuti iwe unozopa Highster Mobile midzi mvumo yekuteedzera enhau maficha.
Unogona kuwana matanho uye tsananguro pano:
Pankaj Menon anoti:
Kuva nemubvunzo wekukurumidza, isu tinofanirwa kudzika mudziyo wekutemera weHighster nhare kuti tikwanise kuratidza Whats App Chats uye zvakare Photo Gallery.
Mhoro Pankaj Menon,
Photo gallery haifanire kuda mvumo mvumo asi zvese zvemagariro midhiya uye IM chat maficha anoda rooting yefoni nhare kuitira Highster Mobile Spy basa.
Unogona kuwana rumwe ruzivo nezve rooting pano:
Ndinoda kuziva kuti kumashure kwenguva sei (mwedzi mumwe, mwedzi mitanhatu, nezvimwewo) chirongwa chingatarise meseji dzadzimwa?
Monitoring software's inogona kutora yemagariro network uye mameseji apfuura eSMS asi iwo anofanira kunge achiri akachengetwa mune yakanangwa foni ndangariro. Inguva yakadii ino mameseji achachengetwa hazvigoneke kuziva nekuti zvinoenderana nerudzi rwefoni, ndangariro huwandu uye zvimwe zvinhu zvakawanda.
Kazhinji, Monitoring maapplication anogona kutora angangoita mazuva manomwe meseji.
Saka unofanira kutora kubaya foni uye dzishandise zvichiongororwa Anwendung pamusoro payo.
Ndatenda nekupindura kwako nekukurumidza. Sezvo ini ndinonzwisisa, iwo mameseji anofanirwa kuchengetwa mundangariro yefoni, asi zvinoreva here kuti anogona kuongororwa kunyangwe iwo mameseji ari kudzimwa?
Ehe, kana icho chipfuro chikabvisa meseji iwe ucharamba uchikwanisa kuchiona mune ingangoita 1 vhiki nguva.
Mhoroi, zvinodikanwa here kuti uise nhamba yefoni yechinangwa kana uchigadzika chirongwa kana danho iri rikasvetuka? Ndatenda.
Hongu, zvinokosha kuti iwe pinza kubaya dzenhare nhamba.
Zviri pamutemo here kushandisa iyi app muUSA? Ndatenda
Ehe, zviri kana iwe uchida kuongorora vana vako kana vashandi vekambani-vane mafoni.
Mhoro Jeff - ini ndakadzora zvese zvinobudirira nekutevera nhanho dzako. Ndatenda. Mubvunzo wangu ndouyu - haisi kuratidza chero nhoroondo yewebhusaiti. Pasi pebhurawuza Nhoroondo tebhu inoti "Hapana zvinyorwa zvakawanikwa"
Ini ndakave nechokwadi chekuti kubhurawuza kwekuteedzera kwakadzvanywa kune iyo ON pasi pezvirongwa. Chete haugone kuziva kuti nei ichiratidzira pasina mawebhusaiti pandinogona kutarisa foni yacho ndega uye nekuona matoni ewebhusaiti. Zvakare inoteedzera kana incognito mode iri kushandiswa? BATSIRA!
Kana iyo tarisiro yekuisa muIncognito modhi haugone kuiona. Iyo App inoburitsa ruzivo kubva ku Browse nhoroondo ndangariro kwaunogona kuona yakashanyira mapeji ewebhu. Incognito modhi haichengetedze chero ruzivo pamusoro pemapeji akashanyirwa pafoni iyi saka haigone kuburitswa.
Mwana Ricky anoti:
Unogona here kuva nerinopfuura rimwe chete runhare?
Mhoro Kid Ricky,
Kwete Highster Mobile inoshandisa kiyi imwe yelayisensi yekutevera imwe nhare mbozha. Mamwe mafoni anoda mamwe marezinesi.
Kana ini ndatoibvisa Highster kunyorera kubva kune ino nhare foni, Ndingave nayo yekuisa kune imwe nhare?
Kwete, haugone. Imwe Highster Mobile rezinesi inouya yefoni imwe, unogona kusunungura uye kuiisa isina muganho wenguva pane iyo foni asi haugone kuishandisa kuongorora imwe foni. Iwe uchafanirwa kutenga rezinesi nyowani.
Unogona kushandisa muWechat?
Ehe, Highster Nhare inotsigira WeChat chimiro uye ichaburitsa yakanangwa nhare WeChat ruzivo.
Ziva kuti kana nharembozha iri Android iwe uchafanirwa kuibvisa iyo IM chats maficha.
Kunyangwe kana yakanangwa iphone isiri jailbreak?
Ndatenda nemhinduro yako
Ndatenda nemubvunzo wako. Ehe, iyo Highster Mobile haina jailbreak uye haina yekuisa ficha iyo inokutendera iwe kuongorora zviitiko zve iPhone.
Kana uine mimwe mibvunzo inzwa wakasununguka kubvunza.
Ndinovimba ndinokubatsira murwendo rwako rwekutarisa.
Marcos Morales anoti:
Zvinoita here kudhawunirodha mafaera ari mufoni mangu uye kuanyatsoendesa kune ekuvavarira foni kuburikidza neotg charger tambo?
Mhoro Marcos Morales,
Kwete, hapana. Maitiro ekumisikidza anoda chiitiko chevanhu. Iwe unozofanirwa kuita matanho sekutendera kurodha pasi iyo app, kupa mvumo, software yekumisikidza maitiro uye kumagumo kumisikidza software zvivakwa izvo zvinogona kuitwa chete nemunhu.
Pane imwe sarudzo yekutarisa zviitiko zve iPhone. Unogona kushandisa Highster Mobile Hapana jailbreak chinhu icho chinokutendera iwe kuti utarise iPhone isina kuisirwa.
Ini ndinogona kuendesa rezinesi kune imwe foni?
Ndiri kuda kuyedza pafoni yangu kutanga ndisati ndaiisa kune iyo TARGET foni.
Kwete haugone kuendesa kiyi rezinesi. Zvakare hapana nzira yemahara yechero spy software iripo pamusika.
Zano rangu kana iwe uchinyatsoda kuzviedza pakutanga kutenga iyo software, edza uye wozodzorera rezinesi iri. Pashure paizvozvo tenga zvakare uye dzishandise kubaya runhare.
Unogona kuiongorora kubva apa:
marty gipson anoti:
app yacho inogona kuiswa kure nekuti handikwanise kuwana chace kuti ndiwane foni
Mhoro Marty Gipson,
Pane software imwe chete iyo inogona kuteedzera yakanangwa nhare uye haidi kuti jailbreaking kana kupinda kwemuviri. Zviri mSpy uye chikamu ichi inongowanikwa chete iPhone.
Iyo mSpy vagadziri vawana izvo kuburikidza nepamhepo control panel uye zvese zvaunoda kuti uite kuisa iyo inodiwa Apple id nePassword mune yepamhepo panhare.
Unogona kuona mamwe ruzivo nezve mSpy pano:
Kana nhare yakatarwa iri Android, BlackBerry, Windows foni kupfuura iyo isina spy software inozoita kuti iwe utarise pasina kuiswa pairi.
Snail Dannie anoti:
Ndiri Snail Dannie anobva kuPNG uye ndinoda kutaura izvozvo, chigadzirwa chako chakanakisa pane chakanakisa uye chakakura kwazvo.
Ini ndato dhawunirodha uye ndaisa chigadzirwa chako mufoni mangu asi handina kugamuchira kiyi yangu yelayisensi yekuvhura iyo app
Ini ndaraira kana kurodha pasi:
Highster Mobile, yeApple "dsx0612.apk faira"
Yangu LICENSE KEY ndapota!
Rubatsiro rwako ndapota.
Mhoro Snail Dannie,
Paunotenga spy software saka unofanirwa kuisa email. Pane iyo email unogamuchira 2 mameseji:
MuCONFIRMATION EMAIL iwe unopihwa ruzivo urwu:
-Yako rezinesi kiyi
-Yako Yekutonga Panel URL: http://evt17.com/highster/
-Mainini gadza menyu chinongedzo: http://highstermobile.com/intro/main-install-menu.html
Kana iwe usingakwanise kuona iyi mameseji tarisa mumarara uye spam folda. Kana iwe usingakwanise kuiwana ipapo iwe unogara uine sarudzo yekutora: zita rekushandisa, password uye rezinesi kiyi kubva pano: